आधा सांसद घटाऔं, बचेको पैसाले सिमानामा प’र्खाल लगाऔं ….ठिक कि बेठीक ? सहमत हुनेले मात्रै सेयर गरौ ! – Enepali Samchar
आधा सांसद घटाऔं, बचेको पैसाले सिमानामा प’र्खाल लगाऔं ….ठिक कि बेठीक ? सहमत हुनेले मात्रै सेयर गरौ !
June 8, 2021 adminLeaveaComment on आधा सांसद घटाऔं, बचेको पैसाले सिमानामा प’र्खाल लगाऔं ….ठिक कि बेठीक ? सहमत हुनेले मात्रै सेयर गरौ !
E nepaalisamchaar// काठमाडौं : मुलुक ‘लकडाउनमा छ । विश्व को’रोना मा’हामा’रीले त्रसित छ । आर्थिकमन्दीले नेपाल मात्रै होइन विश्वका ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरु पनि त्राहित्राही भएका छन् । अब आउने अवस्थाको कसरी सा’मना गर्ने र विश्वको आर्थिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा आ–आफ्नो ठाउँबाट व्यापक बहस भइरहेको छ ।
नेपालजस्तो अ’विकसित र परम्परागत कृषि प्रधान देश त झनै संकटमा फस्ने निश्चित छ ।
तर, यही संकटकाबीच नेपालमा अर्को सं’कट राष्ट्रियतामा संकट)परेको छ । अहिले भारतले प’श्चिम नेपालको भूभाग मिचेपछि स’तहमा आएको राष्ट्रियताको बहसले सिमानामा पर्खा’ल लगाउनु पर्ने अभिम’तलाई थप बल पुगेको छ । तर,सिमानामा पर्खाल लगाउँदा कति बजेट लाग्ला, त्यो सम्भव छ कि छैन । छ भने तारबार लगाउने ब’जेट कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
सर्वप्र’थम तारबार लगाउने कुरा गरिरहँदा यो स’म्भव छ कि छैन भन्ने विषय को’ट्याउनु उप’र्युक्त हुन्छ । सिमा’नामा तार’बार लगाउने कुरा अहिलेदेखि मात्रै उठेको होइन । लामो समयदेखि उठेको यो विषय अहिले अलिक बढी च’र्चामा आएको मात्रै हो ।सिमा’नामा ता’रबार या प’र्खाल लगाउनु अगाडि पहिलो कदमको रुपमा सि’मानाको टुंगो लगाउनु आवश्यक छ । दोस्रो कदम तारबार लगाउने या पर्खा’ल लगाउने भन्ने विषयमा भारतसँग सहमति गर्नु आवश्यक छ ।
सहम’तिको पहलले नभए तेस्रो क’दमको रुपमा नेपालले आफ्नो सिमा’ना आफैं पर्खा’ल लगाउने नि’र्णय गर्नु पर्दछ । त्यसअघि आत्म’निर्भर’ताको दह्रो खुट्टा टेक्ने गरी आन्त’रिक जनतामा एकताको मनो’विज्ञान नि’र्माण गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि शा’सकहरुले अहिलेजस्तो ६ महिना, २ वर्षमा सरकार गिराउने खेल ब’न्द गर्नु पर्छ र जनवि’श्वास बढाउनु पर्छ । भ्रष्टाचार, अपार’दर्शीता र घुष’खोरी ब’न्द गर्नुपर्दछ ।
चौथो कदम भारतबाहेकको छिमेकी राष्ट्र चीन तथा अन्य सहयोगी रा’ष्ट्र र संयुक्त रा’ष्ट्र संघस’मेतलाई सहमत गराउनु पर्दछ र पाँचौं कदमको रुपमा ब’जेट व्यवस्थापनको जोहो कसरी गर्ने,कति समयमा प’र्खाल लगाइसक्ने भन्ने विषयको ठोस यो’जना
सार्वज’निक गर्नु पर्दछ ।चौथो कदम भारतबाहेकको छिमेकी रा’ष्ट्र चीन तथा अन्य सहयोगी रा’ष्ट्र र संयुक्त रा’ष्ट्र संघ’समेतलाई सहमत गराउनु पर्दछ र पाँचौं कदमको रुपमा बजेट व्यवस्थापनको जोहो कसरी गर्ने,कति समयमा प’र्खाल लगाइसक्ने भन्ने विषयको ठोस यो’जना सा’र्वजनिक गर्नु पर्दछ ।
उल्लेखित ५ कदममध्ये पहिलो,दोस्रो र चौ’थो कद’म सरकार तथा राज’नीतिक पार्टीको उपल्लो तहले रा’ष्ट्रिय सहमति कायम गरेर संयुक्त पह’ल गर्नुपर्दछ । त्यसो भयो भने तेस्रो र पाँचौं क’दम पुरा गर्न जनताले मनग्ये सह’योग गर्ने देखिन्छ ।
नेपालीको मनो’विज्ञान अहिले पनि भारत वि’रोधी छ र प’र्खाल लगाउनुपर्छ भन्नेमै एकमत देखिन्छन् । सिमानामा केही तस्क’री गरेर फाइदा कमाउने बाहेककाहरुले यो कदमलाई सह्रानी’य मान्नेछन् । त्यसो भए जनतालाई एकताब’द्ध गर्ने र राजनीतिक पार्टीहरु,सरका’रप्रति विश्वास यो’ग्य वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ त ?
मेरो विचा’रमा पहिलो कुरा त राज’नीतिक पार्टीका शी’र्ष नेताहरुले भारतको चल’खेलमा नअ’ल्मलिने प्राय’श्चित गर्नु पर्दछ । दो’स्रो कुरा अहिले आम नेपाली जनताले ख’र्च क’टौतिको कुरालाई जो’ड दिइरहेका छन् । त्यसको पहिलो तारो राजनीतिक
द’ल र संघी’यता बनेको छ । सांसदै सांसद र मन्त्री नै मन्त्रीको देश,सेवा सुविधा र भ्र’ष्टाचारले डुबेको देशको रुपमा जनताले बुझिरहेका छन् । त्यो कुरालाई चिर्न’का लागि अब सबै द’लहरुले प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या,राष्ट्रिय सभाको सदस्य संख्या र प्रदेशको संसद संख्या अर्थात् नि’र्वाचन क्षे’त्रको संख्या घटा’उनु पर्दछ ।
यसो गर्दा मात्रै जनतामा विश्वासको सं’कट मोच’न हुन सक्दछ । यो क\_दमले प’र्खाल लगाउन गर्नुपर्ने तेस्रो र पाँचौ कदमलाई बल पुग्नेछ । जस्तोः हामी सांसदको संख्या घटाउँछौं र सिमानामा पर्खाल लगाउँछौं भन्ने आव्हान सरकारले गरेको खण्डमा स्वतः जनमत राजनीतिक पा’र्टी र सरकारको प’क्षमा आउनेछ र राष्ट्र एकता’बद्ध हुनेछ ।
त्यसका लागि अहिलेको प्रतिनि’धिसभा,रा’ष्ट्रियसभा र प्र’देशसभाका सांसद संख्या (निर्वाचन क्षेत्र)५० प्रतिशत कटौति गर्दा ५ व’र्षमा झण्डै ४८ अर्ब २ करोड ७० लाख रकम बच्नेछ । यति ठूलो रकम कसरी बच्छ हेर्नुहोस् हाम्रो सो’झो हि’साव ।
हाल प्रतिनि’धिसभामा २ सय ७५ सांसद छन् । यस्तै राष्ट्रिय सभामा ५९ र ७ वटै प्रदेशमा ५ सय ५० जना सांसद छन् । यसरी हेर्दा रा’ज्यमा सं’घको २ सदन र ७ वटा प्रदेशको ७ वटा प्रदे’शसभा गरी कुल ८ सय ८४ जना सांसदहरु रहेका छन् ।हाल स्वकीय
सचिवको त’लब र संसद भ’त्ता,पैद’ल भत्ताल’गायतका सुवि’धासहित सरदर एक सांसदले मासिक करिब एक लाख रुपैयाँ प्राप्त गरिरहेका छन् । सांसदको संख्या (निर्वाचन क्षे’त्र) आधा घ’टाउँदा मात्रै पाँच वर्षमा २ अर्ब ६५ करोड २० लाख घ’ट्ने छ ।
यस्तै सांसद संख्या घ’टाएपछि नि’र्वाचन क्षे’त्र पनि घ’ट्छ र निर्वा’चन क्षेत्र वि’कास को’षका लागि सरकारले बजे’ट दिनुपर्ने अव’स्था पनि आउँदैन । हाल संघीय सांसदलाई प्रत्येक निर्वा’चन क्षे’त्रका लागि ६ करोड रुपैयाँ दिइएको छ । विकासकै लागि दिइएको ब’जेट भएपनि सं’कट मो’चनका लागि अब यो बजे’ट रोक्नु आवश्यक छ । यसो गर्दा सो’झो हिसावले नै ५ वर्षमा २४ अर्ब ७५ करोड बँच्ने देखिन्छ ।
यस्तै प्रदे’श सांसदलाई २ करोड ५० लाखको दरले प्रतिवर्ष छुट्या’एको रकममा पनि आधा नि’र्वाचन क्षे’त्र घ’ट्दा पाँच वर्षमा २० अर्ब ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट बच्ने देखिन्छ । सांसदको से’वा सु’विधा,पारि’श्रमिक र संसद वि’कास कोषको बजे’ट आधा घ’ट्दा मात्रै राज्य’को’षमा पाँच वर्षमा ४८ अर्ब २ करोड ७० लाख रकम बच्ने देखिन्छ । यो बजेट सि’मामा प’र्खाल लगाउँछौं भन्दा जनताले नमान्ने कुरै छैन ।
सिमा’नामा प’र्खाल लगाउँदा कति बजेट लाग्ला ?सांसद विकास कोषको रकम र निर्वाचन क्षे’त्र आधा घ’टाउँदा ४८ अर्ब २ करोड ब’जेट ब’च्ने देखियो भने सि’मानामा पर्खा’ल लगाउँदा चाहिं कति बजेट चाहिएला ? साढे ६ फिट अग्लो,१०–१० मिटरमा दुईवटा
१२ इन्चको पि’लर राखेर इन्चको वाल निर्माण गर्दा अहिले काम चल्ने ब’रिष्ठ इन्जिनियरहरुको भनाइ छ । इन्जि’नियरहरुसँगको परा’मर्श अनुसार उल्लेखित क्षमताको प’र्खाल लगाउन प्रति’किलोमिटर करिब १ करोड ५० लाख लाग्ने अनुमान छ । भारत र नेपालको सिमाना १ हजार ७ सय ५८ किलोमिटर छ ।
अब हामी भन्न सक्छौं,त्यही हिसावले भन्ने हो भने सि’मानामा पर्खाल २६ अर्ब ३७ करोडमा बन्ने देखियो । पाँच वर्षमा बनाइसक्ने लक्ष्य लिएर काम सुरु गर्ने हो भने मूल्य वृद्धि हुँदा र अत्या’धिक ख¥र्च बढ्दा पनि लगभग ५० अर्ब रुपैयाँले मनग्ये प’र्खाल लगाउन पुग्ने देखिन्छ ।
यसअर्थ सरकारले सि’मानामा प’र्खाल लगाउने अभियानलाई सा’र्थक बनाउन आजैदेखि लाग्नु आवश्यक छ । कोरो’ना भा’इरस निय’न्त्रणका लागि ल’कडाउन गरिएको बेला पनि खुल्ला सिमा’नाको फाइदा उठाउँदै भारतबाट भागेर नेपाल आउनेहरुले यहाँ धमाधम को’रोना भा’इरस सारिरहेका घट¥नाले पनि पर्खालको औ’चित्य अझै बढेर गएको छ ।
सि’मामा हुने नेपाल भारतको सँधैको विवा’दका अलावा चोरी,तस्करी,लागू औषधको अ’वैध कारोबार,सिमा’पारीबाट हुने अ’परा’धि’क क्रिया’कलापले नेपाल आ’क्रान्त बनिरहेकै छ । लिपुलेकमा भारतले स’डक निर्मा’ण सम्पन्न
गरेर उ’द्घाटन गरिसकेको घ’टनाले नेपाललाई सि’मा र’क्षाका लागि एकताबद्ध हुने र दी’र्घकालिन समा’धानका लागि ठूलो अवसर दिएको छ । यसका लागि रा’ष्ट्रवादी सरकारको कदम नै म’हत्वपूर्ण देखिन्छ । मौकामा हिरा फोर्नु’ बुद्धि’मानी शा’सकको क’र्तव्य पनि हो ।-ताजा खबर अनलाइन बाट
जेठ २६ गते बुधबार तपाईंको राशिफल
सरकार निषेधाज्ञा खुकुलो पार्ने तयारीमा: यी ६ वटा क्षेत्र पहिलो चरणमा खुल्दै
मध्य रातमा मेलम्चीबाट आयो सबैलाई रु’वा’उने ख’बर :मेलम्ची खोलामा फेरि आयो भीषण बाढी,मान्छे भागाभाग
पुर्ब सचिव भिम उपाध्यले पोखे आफ्नो जिबनको सुन्दर अनुभुति
जसपाका नेता कार्यकर्तालाई खुसी बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले गर्‍यो यस्तो निर्णय!
संसद बिउँतिए प्रधानमन्त्री काे बन्छ ? देउवा की माधव नेपाल यस्तो छ भित्री तयारी June 19, 2021
आज पनि देशका विभिन्न जिल्लामा भारि वर्षा हुने यी नदीमा आउन सक्छ बाढी (सूची सहित) June 19, 2021
असार ९ देखि दुबई–काठमाण्डौ उडान भर्ने, टिकट मूल्य पनि यति सस्तो ! ? June 19, 2021
फेरि अर्को बिपत्तिको संकेत: तामाकोशी नदी थुनियो, जुनसुकै बेला बाढी आउँन सक्ने भन्दै प्रशासनले गर्यो यस्तो अपिल ! June 18, 2021
मध्य रातमा मेलम्चीबाट आयो सबैलाई रु’वा’उने ख’बर :मेलम्ची खोलामा फेरि आयो भीषण बाढी,मान्छे भागाभाग June 18, 2021